यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-८)-कृषि | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर विविध यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-८)-कृषि
यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-८)-कृषि
१६ चैत्र २०७७, सोमबार १७:३५
रघुगंगा गाउँपालिकामा पुर्ण कृषिमै आस्रित परिवार ज्यादै न्यून छ । कृषि पेसासँग आवद्ध नभएको परिवार पनि रघुगंगा भित्र कम मात्रामै रहेका छन । तर ठूलो मत्रामा जिविको पार्जनको शिलशिलाममा मात्र कृषिजन्य सामाग्री उत्पादनभैरहेको छ । व्यवसायीक रुपमा न्यून मात्रामा भेडा,कुखुरा, तरकारी र फलफूल उत्पादन भैरहेको छ ।
जिल्ला विकाश कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क पुस्तिका, आ.ब. ०७२/७३ अनुसार रघुगंगामा कुल जग्गाको क्षेत्रफल ४०,६८५ हेकटर रहेको छ । सो मध्य खेती गरिएको जमिन ३,३५९ हेक्टर रहेको छ । सिंचाई सुविधाको आधारमा २४० हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा रहेको छ भने ३८९ हेक्टर जमिनमा मैसमी अर्थात बर्षा याममा मात्र सिंचाई हुन्छ । त्यसै गरि यस गाँउपालिकाको २,८२१ हेक्टर खेति भैरहेको जमिन सधै असिंचित नै रहन्छ ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा रघुगंगाको कृषि क्षेत्रको पहिलो र गहन समस्या भनेको सिंचाई नै हो । हामी सँग पानिको मुहानको समस्याले गर्दा सिंचाईको समस्या देखिएको हैन् । हामी सँग भएको साधन र श्रोतको प्रयोगका लागी प्राथामिकता कृषि क्षेत्र नपर्नु मुख्य कारण हो । यस समस्याको समाधानका लागी आवश्यकताको मात्रा मुल्याङ्कन गरि प्राथामिताका आधारमा सिंचाईको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्र प्राथामिकतामा पर्न नसक्नुको कारण जग्गाको वितरण प्रणाली हो । जो कृषि कर्मलाई जिविको पार्जनका साथै व्यवसायीक बनाउन खोज्छ, उनिहरुसँग उचित र प्रयाप्त जमिनको अभाव छ । स्थानिय सरकारले कृषिमा आश्रितको जनसङ्ख्यालाई अन्य बैकल्पिक रोजगारको बिकल्प प्रधान गरि खेति योग्य जमिनलाई स्थानिय सरकारले लिजमा लिदै सामुहिक तथा व्यवसाहिक उत्पादनका लागी जोड दिनु अबको आवश्यकता हो । यसका लागी उत्पादनको प्रकृतीको अध्ययन गर्दै कृषि ब्लक घोषणा गर्दै कृषि क्षेत्र अघि बढाउनु पर्छ ।
यो प्रकृया रघुगंगा गाउँपालिकाले सुरु गर्ने प्रयास गरेको थियो तर अध्यन, अनुसन्धान र दिगो योजनाको कमिले सोचे अनुरुप नतिजा निस्कन सकेन । पालिकाले आ.ब. ०७४/०७५ मा कृषि क्षेत्र सुधारका लागी एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र आ.ब. ०७६/०७७ मा एक वडा एक नर्सरी कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । तर दुबै कार्यक्रमले पुर्णता पाउन सकेनन् । यो कार्यक्रमको स्वरुपमा पुनः अध्ययन गर्दै कार्यक्रमलाई दिगो रुपमा निरन्तरता दिनु हितकार हुनेछ । सुन्तला, टिम्मुर, सिमी, आलु, सिल्टिम्बुर आदी खेतिको ब्लग छुट्टाएर व्यवसायीक रुपमा अघी बढ्न सकिन्छ ।
साथै व्यवसायीक तरकारी खेतीको लागी रघुगंगा गाउँपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधीभित्राएर सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र मिलेर अर्गानिकता कायम राख्दै कृषि क्रान्ती गर्नु अबको समयमको माग हो । हामीसँगको पानी र जमिनको उपलब्धता हेर्दै कृषि उत्पादनका लागी पछिल्लो समय ईजरायल हुदै विश्वव्यापी भैरहेको Aeroponics र Hydroponic प्रविधी भित्राउन तत्काल आवश्यक र सम्भावना पनी रहेको छ ।
यसको बजारीकरणको लागी सहकारी साथै निजी क्षेत्र मार्फत गर्न सकिन्छ । भने आर्थिक व्यवस्थापन निजी र सरकारी क्षेत्रले मिलेर गर्न सक्ने बनाउनु पर्दछ किनभने यो प्रथम लगानी गर्दा केही महङ्गो कार्यक्रम हो । गाउँपालिकाले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै करिब १०० जनालाई १०-१० लाखको लगानी गर्न पोत्सान गर्ने हो र सरकारी क्षेत्रले तेही मात्रामा लगानी गर्ने हो भने हामीले स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गर्दै पालिकाको आन्तरिक आयमा पनी भारी मात्रामा बृद्धि गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको प्राबिधिक पाटोको जिम्मा मुक्तिधामको कृषि संकाएलाई दिने हो भने कार्यक्रम दिगो हुनेछ भने प्रतिफल छिटो आउने छ । विद्यार्थी पनी व्यवसायीक मानसिकता सहित त्पादन हुन्छन । त्यस्तै सहकारी मार्फत कार्यक्रमको फैलावट छिटो गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने अर्को काम भनेको बनको उचित र बैज्ञानिक व्यव्थापन गरी जडिबुटी लगायतका बस्तु उत्पादनका लागी प्रयोग गर्नु पर्दछ । जस्तो की तल्लो भेगको बनमा टिम्बुर, बेसार भने माथिल्लो भेगमा सिल्टिम्बुर, पाचँअम्ले, जटामसी आदी ।
त्यस्तै गाजाँको व्यवसायीक खेती पनी रघुगंगाको कृषि क्षेत्रको बिकास र रघुगंगाको आर्थिक मेरुडण्ड हुन सक्छ । विविध गाजाँका प्रकार पालिकाको बिबिध क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय बिश्व बजारमा गाजाँको सामाग्रीको माग अत्याधिक रहेको छ र विश्वका धेरै राष्ट्रले गाजाँलाई कानुनी मान्यता दिरहेका छन् । केही समय पहिले युएनले पनी गाजाँलाई कानुनी रुपमा खुला गरेको छ । यसमा नेपालले पनी गाजाँलाई बैधानिक बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा भोट गरेको थियो । त्यसलगतै हाम्रो संसदमा पनी गाजा विधेयक दर्ता भएको छ । संसदमा बहस पछी यो विधेयक पास हुने सम्भावना अत्याधिक रहेको छ । संसदले गाजा खुला नगर्दै सरकारका सर्तसहित औषधीका लागी उत्पादन गर्न सकिने बाटो छ । भने संसदले गाजा विधेयक पास गर्यो भने गाजाँबाट सयौं प्रकारका सामाग्री र तिनका कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नका लागी आवश्यक तयारी सहित बस्दा छिटो बजार पहिलाउन सकिने छ ।
स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्दै व्यवसायीकरण गर्दै जाने हो भने बेरोजगारी लगायतको समस्यामा सुधाई आउन सक्छ भने पालिकाको आन्तिक आयमा पनी भारी मात्रामा बृद्धि हुनेछ ।धन्यबाद ।।
7.यदी म रघुगंगा गाउँपालिका प्रमुख भए भने … (भाग-७)-शिक्षा (क्याम्पसको स्थापना)